तीन जिल्लाका जनप्रतिनिधिद्धारा शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा प्रतिबद्धता ।
सोलु एफ.एम १६ मंसिर सोलुखुम्बु ः सोलुखुम्बु ,ओखलढुंगा र खोटाङका जनप्रतिनिधीहरुले शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अभिमुखीकरणमा सहभागी पूर्वी पहाडका तीन जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुले शैक्षिक नीत प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने बताएका हुन् । जनप्रतिनिधी र शिक्षा स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने कर्मचारीलाई...
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको धर्ना ।
सोलु एफ.एम १६ मंसिर सोलुखुम्बु ः लैगिक हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियानको आइतबार आठौ दिन सोलुखुम्बुमा धर्ना कार्यक्रम सम्पन भएको छ । महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार जिल्ला प्रसाशनमा धर्ना इिएको हो । आइतबार दिउसो १ बजे देखि २ बजेसम्म प्रसाशन अगाडी धर्ना दिइएको जिल्ला सञ्जाल सोलुखुम्बुले जनाएको छ । सोलु् दुधकुण्ड नगरपालिकाको...
बासाखालि माध्यमीक विद्यालयले स्वर्ण महोत्सव मनाउने ।
मंसिर १५, सोलुएफएम, सोलुुखुम्बु ः माप्यदुधकोशी गाउँपालिका स्थीत बासाखालि माध्यमीक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवलाई सफल बनाउन सबैलाई अनुरोध गरीएको छ । सल्लेरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवको सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरु सफलता पूर्वक सम्पन्नको लागि आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगको लागि समितीले सम्पूर्ण नागरिकसंग अपिल गरेको हो । बिक्रम संवत् २०२५ सालमा...
यमुना मगर सोलु एफ. एम १४ मंसिर काठमाडौँ ः गायिका खिमा रोका मगरर गायक तेजेस रेग्मी को रोइला दोहोरी गित तातो तातो कफि को भरखरै म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । मँसिरको पहिलो हप्तामा निर्माण भइको भिडियोको सिभम पोखरेलले निर्देशन तथा मुकेश हुमागाईले छायाङकन गर्नु भएको छ । धर्मास्थली काठमाण्डौमा उक्त गितको म्युजिक भिडियो छायाङकन सकिएको थियो । रोइला गितमा ठट्यौली...
अग्नी पीडित शिक्षकलाई बिद्यार्थीको सहयोग ।
रामधन राई सोलु एफ.एम १४ मंसिर खोटाङ ः खोटाङको दिक्तेलस्थित सरस्वती माबिका पुर्वबिद्यार्थीले अग्नी पीडित शिक्षकलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन । गत कात्तिक २३ गते बिहान ३ बजे भएको भिषण आगलागीबाट बिस्थापित भएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल रत्नपार्कका अग्नी पिडित शिक्षक कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पुर्वबिद्यार्थीको समुहले शुक्रबार आर्थिक सहयोग गरेको हो...
याङजी राई सोलु एफ.एम १४ मंसिर सोलुखुम्बु ः खुम्वु पासाङ ल्हमु गाउँपालिकामा रहेको पासाङ ल्हमु निकोलनिकी अस्पतालमा सम्पन्न आँखा शिबिरमा ८ सय ८ जनाले सेवा लिएका छन् । मङ्सिर १२ गतेदेखि १४ गते सम्म भएको शविरमा उक्त सेवा ग्राहीले आँखा परीक्षण गराएका हुन् । दृष्टिदोष भएकाहरुको लागि लक्षित गरेर गरिएको शिबिरमा १ सय २९ जनालाई चस्मा वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ । शिविरमा...
खुम्बुमा चामल ढुवानी शनिबारबाट सुरु हुने ।
सोलु एफ.एम १४ मंसिर सोलुखुम्बु ः खुम्बु क्षेत्रमा खाद्यसंस्थानको चामल ढुवानी प्रक्रिया पुरा भएको छ । ढुवानीको प्रक्रिया सबै पुरा भएको र शनिबार देखि नै चामल ढुवानि हुने नेपाल खाद्यसंस्थान कार्यालय सल्लेरीले जनाएको छ । अहिले गोदाममा करिब २ सय २० क्वीन्टल चामल रहेको र सल्लेरीमा विक्रि नभइरहेको अवस्थामा चामल लुक्ला पठाउने कार्य सुरु गरिएको कार्यालयका प्रमुख...
मंसिर मसान्त सम्म ५० प्रतिशत काम सकिएको वडा अध्यक्ष शेर्पाको दावि ।
सोलु एफ.एम १४ मंसिर सोलुखुम्बु ः सोलुदुधकुण्ड नगरपालीका ९ का वडा अध्यक्ष काजी शेर्पाले मसिंर भित्र आफ्नो वडाको विकास निर्माणको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताउनुभएको छ । केहि दिनमा अष्ट्रिय जान लाग्नु भएका वडा अध्यक्ष शेर्पाले सोलु एफ.एमसँग कुरा गर्दै विकास निर्माणको कार्यमा वडा नम्बर ९ अगाडी रहेको दाबी गर्नुभयो । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा वडा नम्बर ९ को...
वडा कार्यालयको भवन उद्घाटन ।
तारा कुलुङ सोलु एफ.एम १४ मंसिर सोलुखुम्बु ः सोलुखुम्बुको महाकुलुङ वडा नम्बर २ को वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ । वडापालिकाको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको भवनको उद्घाटन आज प्रदेश नं १ (क) का संसद उत्तम कुमार बस्नेतले उद्घाटन गर्नु भएको हो । चारवटा कोठा रहेको वडाकार्यालय भवन स्थानीय जनश्रमदान सहित २९ लाख ९८ हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको वडाअध्यक्ष प्रदिप...
तल्लो सोलु करिडोले मुआब्जा वितरण प्रकृया सुरु ।
सोलु एफ.एम १४ मंसिर सोलुखुम्बु ः तल्लो सोलु करिडोले मुआब्जा वितरण प्रकृया सुरु गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको कानुनी जटिलताका कारण ढिलाइ भएको सोलु करिडोर १ सय ३२ केभी प्रसारण आयोजनाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको हो । यो सँगै करिडोरको कामले पनि गति पाएको छ । सोलुखुम्बुको तिंलादेखि सिरहासम्म निर्माण गरिने उक्त प्रशारण लाइन ओखलढुंगाको क्षेत्रमा रहेका...
क्याम्पस प्रमुख शर्मा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता टोलिको सदस्यमा मनोनित ।
सोलु एफ.एम मंसिर १२ सोलुखुम्बु ः सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पस सोलुखुम्बुका प्रमुख उद्धवकुमार शर्मा प्रदेश विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदलको सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कात्तिक २६ गते बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले क्याम्पस प्रमुख शर्मालाई कार्यदलको सदस्यमा मनोनित गरेको हो । भोजपुरका प्रा. डा. महेशराज दाहालको संयोजकत्वमा...
वडा अध्यक्ष वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको भन्दै सदस्यको आपत्ति ।
महेन्द्र शाही सोलु एफ.एम १३ मंसिर सोलुखुम्बु ः सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष अधिकाशं समय विदेशमा रहने गरेको र सेवा प्रभाहमा समस्या भएको वडा सदस्यले बताएका छन । वडा अध्यक्ष काजी शेर्पा आफ्नो पर्यटन व्यवसायका लागि अघिल्लो वर्ष पनि अष्ट्रिया गएको र यो वर्ष पनि अष्ट्रिया जना लागेको महिला वडा सदस्य आङ फुर्वा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । वडा...
निजि सवारीको मनपरी ।
सुवास दर्नाल सोलु एफ.एम १३ मंसिर सोलुखुम्बु ः सोलुखुम्बुको सल्लेरी देखी माप्यदुधकोशी क्षेत्रमा सञ्चालित रातो नम्बर प्लेटको जीपले मनपरी भाडा लिएको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । गत सोमबार मात्र गाउँपालीकाले निर्धारण गरेको भाडादर भन्दा करिब दुई सय रुपैया बढी भाडा लिने गरेको यात्रुको भनाई छ । सो क्षेत्रको अधिकाशं सडक कच्ची भएकाले सोही अनुसार सोमबार यातयात ब्यवसायी...
नगरपालिका भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापक विच अर्धबार्षिक छलफल ।
सोलु एफ.एम १३ मंसिर सोलुखुम्बु ः सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालीका र नगरपालीका भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु विचको अर्धबार्षिक छलफल सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्र्तगत नगरपालीका र नगर क्षेत्रका विद्यालयहरुका प्रअहरु बीच शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, बर्षे तथा हिउँदे विदा,...
बाली विमा सुरु ।
सोलु एफ.एम १३ मंसिर सोलुखुम्बु ः आईएमई जनरल ईन्सुरेन्स शाखा सोलुखुम्बुले बाली विमा सुरु गरेको छ । पशु, अग्नी, मोटर लगायतका विमा गरिसकेको ईन्सुरेन्सले विहिबारबाट बाली विमा पनि सुरु गरेको हो । विमा कम्पनीले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ लोखिमका २ जना र वडा नम्बर ५ जुबुका ३ जना गरी ५ जना अलैची कृषकको अलैची विमा गरी बाली विमाको सुरुवात गरेको जनाएको छ...